US oo dad Soomaali ah sharci ku meelgaar ah siisay - BBC Somali
US oo dad Soomaali ah sharci ku meelgaar ah siisay
Laantan ayaa dadkani u ogolaatay inay 18 bilood oo kale ay dadkaasi ku siinoolaan karaa dalka Mareykanka, kaddib markii ay qiimeeyeen xaaladda Soomaaliya, sida waaxda ay sheegtay.
Dadkan ayaan markii hore sharci haysan, qaar ka mid ahna waalagala noqday, waxayna sugayeen in Soomaaliya lagu celiyo, laakiin kaddib markii xaaladooda la qiimeeyay waxaa loo ogol yahay inay mareykanka ka sii shaqeystaan.
Dadkan badankooda waxa ay ahaayeen kuwii sharciyada ku meelgaarka ah la siiyay 2012kii.
Hadaba arimahaasi la xidhiidha daganaansaha ku meelgaaarka ah waxaan ka waraysanay, Qareen Abdinasir Mohamed Abdulahi oo kutakususay arimaha socdaalka iyo dastuurka wadanka maraykanka. waxaana waraystay waraiyaha BBC-da Mohamed Haji Hussein oo waydiiyay marka hore dad noocee ah ayaa ka faaidaysanay arman daganaasha ku meel gaarka ah lasiinayo Somalida